Tatoazy amin'ny vavonin'ny vehivavy, inona no tokony ho fantatra | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy amin'ny vavonin'ny vehivavy, inona no tokony ho fantatrao
Nat Cherry | | Tattoos on
ny tombokavatsa ao an-kibon'ny vehivavy dia karazana iray izy ireo tombokavatsa izany dia mety hiteraka fisalasalana maro. Naratra mafy izy ireo? Inona avy ireo toetra mampiavaka azy ireo? Inona no mitranga raha bevohoka ianao?
Ao amin'ity lahatsoratra ity hovaliantsika ny fanontaniana rehetra afaka tonga ao an-tsaina izany rehefa mahazo an'ity tatoazy ity isika.
1 Inona avy ireo toetra mampiavaka azy ireo?
2 Naratra mafy izy ireo?
3 Inona no mitranga raha bevohoka ianao?
Inona avy ireo toetra mampiavaka azy ireo?
Ny toetra mampiavaka ny tombokavatsa eo amin'ny kibon'ny vehivavy dia miharihary fa mifandraika amin'ny toerana misy azy ireo.: manomboka eo ambanin'ny tratra ka hatrany amin'ny pubis. Manomboka eto dia zava-dehibe ny mampifanaraka ny endrika amina endrika an'io faritra amin'ny vatana io. Ohatra, azo apetraka amin'ny valahana, manodidina ny foitra, ao amin'ny kibony ambany ...
Izy io dia toerana tena mahaliana manasongadina ny faritra sasany amin'ny vatana, Satria miankina amin'ny toerana nametrahanao azy sy ny endrika afaka manatsara ny tratra, kibo ...
Naratra mafy izy ireo?
Ny kibo dia iray amin'ireo faritra maharary indrindra amin'ny resaka fanaovana tatoazy. Na dia miankina betsaka amin'ny faritra sy ny lanjany aza izany dia azonao atao ny manantena traikefa maharary.
Ny faritra maharary indrindra amin'ny kibo dia ao amin'ny taolan-tehezana, ny foitra ary ny kibony ambany. Ireo faritra hafa (andilana, kibo) dia matanjaka antonony.
Inona no mitranga raha bevohoka ianao?
Raha mikasa ny bevohoka ianao dia mety ho tsara kokoa ny miandry miandry tatoazy amin'ity faritra amin'ny vatana ity. Na dia tsy misy zavatra tokony hitranga aza, dia misy ny risika kely fa, miaraka amin'ny fitomboan'ny kibony izay haingana dia ho simba ny endrika. Rehefa niteraka ianao dia tokony hiverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra, na dia, araka ny efa nolazainay, dia misy ny kely azo inoana fa hikasika mandrakizay ny endrika.
Na izany aza, Na dia amin'ity tranga ity aza dia tsy mbola faran'ny izao tontolo izao, satria afaka mifanerasera amin'ny mpanakanto tatoazy ianao hanohina ny volonao.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra momba ny tatoazy amin'ny kibon'ny vehivavy ity dia nanampy anao hialana amin'ny fisalasalana. Lazao anay izay rehetra ilainao ao amin'ny hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny vavonin'ny vehivavy, inona no tokony ho fantatrao
Tatoazy Libra, ny famantarana zodiaka voalanjalanja indrindra
Tatoazy Neny, ny fomba tsara indrindra hanomezam-boninahitra ny reninao